Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Lucas Digne Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara "Luca". Anyị Lucas Digne Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, nzụlite ezinụlọ ya, ndụ onwe onye ya, eziokwu ezinụlọ, ụdị ndụ ya, na ihe ndị ọzọ amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike o nwere igbochi ndị mwakpo inweta ihe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Lucas Digne nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere casmụaka Lucas Digne - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Aka ekpe Lucas Digne a mụrụ na 20th ụbọchị nke July 1993 na Meaux commune na France. Ọ bụ nwa nke abụọ n'ime nne abụọ nne ya, Karine Digne na nna ya, Philippe Digne.
A mụrụ Lucas Digne nye ndị nne na nna ndị amachaghị banyere ha.
Onye France nke so na ihe ọkụkụ nke ndị agbụrụ agbụrụ ọcha nwere mgbọrọgwụ na-enweghị isi zụlitere na Meaux na France ebe o toro na nwanne ya nwoke nke okenye - Mathieu Digne.
A zụlitere Lucas Digne na mkparịta ụka Meaux na France.
O toro na ala nna ya na Meaux France, Digne zụrụ ụzọ nwanne ya nwoke nke okenye bụ Mathieu site n'ịgba bọọlụ mgbe ọ dị obere.
Mgbe Digne nọ ya, ọ gwara onye ọ bụla chọrọ ige ntị na ọ ga-abụ ọkachamara na egwuregwu ahụ ma nwee ụkpụrụ zuru oke iji mee ka isi okwu ya laa.
Lucas Digne Mmụta na Carelọ Ọrụ:
Dika nwatakiri Digne toro ogo na nkpa, mmasi ya na football mere ka o buru onye isi.
Ọ dabara nke ọma, ntinye aha na Mareuil-Sur-Ourcq dị na klọb nyere ya ohere zuru oke iji nweta asọmpi asọmpi na nke kachasị mkpa, kwuo okwu nkwupụta ya maka ịbụ ọkachamara.
Ka ọ na-erule oge Digne dị afọ 9 na 2002, ọ sonyeere ọgbakọ dị nso, Crepy-en-Valois ebe ọ na-emeghị nke ọma na nka ndị enwetara site na ọzụzụ afọ 3 na Mareuil-Sur-Ourcq mana ọ mepere emepe ịmụtakwu isi.
Kaadị njirimara Lucas Digne na Crepy-en-Valois. Ebe E Si Nweta Foto: Francefootball.
Lucas Digne Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
N'oge elu Digne na Crepy-en-Valois nwere njikọ football, ọ ghọrọ ihe siri ike ileghara anya mgbe ntutu ya na-acha ọcha wee bụrụ ụdị akara nke mere ka ndị na-egwu egwu si Lille soro ọnọdụ ya dị egwu n'oge egwuregwu asọmpi.
Alex Iwobi nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Ya mere, e webatara ihe ngosi football nke afọ 12 na usoro ntorobịa nke Lille ebe o bilitere n'ọkwá n'ime afọ 5 sochirinụ iji mesịa bulie ndị otu egwuregwu klọb.
Ọ gara n'ihu ịbanye na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na ndị France na July 2010.
Lucas Digne na-egwu Lille dị ka ọkachamara.
Lucas Digne Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Maka Digne, Lille abụghị ebe a na-azụlite ka ọ na-elekwasị anya na imezu nrọ nwata ya maka igwu egwu Paris Saint Germain.
Ihe mmepe ahụ na-akọwa ngwa ngwa ọ na-aga "ụlọ nrọ" na 2013 mgbe ọ nọrọ oge abụọ na Lille.
PSG si na Lille banye Lucas Digne na 2013.
Mgbe ọ nọ na PSG, o yiri ka Digne ọ haziri ka ọ gafere oge na bench. O nweghi ohere iguzosi ike na klọb ebe emere ya onye na-egwu egwu mgbe ọ bịarutere wee bụrụ onye a na-ejighị ya dochie anya ọtụtụ egwuregwu dị egwu ya.
Iji kpuchie ya niile, e nyere ya ego maka Rom maka oge 2015/2016 mgbe ọ nọrọ naanị afọ abụọ na ndị Paris.
Lucas Digne Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Ọ bụ ezie na Digne nọrọ naanị otu afọ na Roma, ihe ngosi ya maka klọb ahụ karịrị ihe ọ dere na PSG na oge abụọ, a tụghịkwa anya na ọ bụ flop na Barcelona ebe ọ kwagara na 2016 wee nọrọ oge abụọ na-egwu n'akụkụ ihe egwuregwu football dị ka. Lionel Messi.
Ọganihu ngwa ngwa ruo taa, Digne na-egwuri egwu maka Everton FC mgbe ọ bịanyere aka na klọb na 2018. Obi abụọ adịghị ya na ọ nwere obi ụtọ n'akụkụ Bekee ebe o dekọtara ọtụtụ ebumnuche na ọrụ ya n'oge edere. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Lucas Digne nọ na ezigbo akara goolu na Everton.
Nwunye Lucas Digne - Tiziri Digne:
Mbilite Digne site na Lille nọgidere bụrụ ihe dị mkpa nye ya n'ime ọtụtụ afọ, ọkachasị maka eziokwu ahụ zutere enyi nwanyị - Tiziri Digne n'oge ahụ.
Birdị ịhụnanya ahụ dị afọ iri na isii n'oge nzukọ mbụ ha, ghọrọ ụzọ na-enweghị ike ịkọwa ma gaa ịlụ di na nwunye na Disemba 16.
Lucas Digne na nwunye ya bidoro mgbe ha dị afọ iri na ụma.
Tziri so n’ihe ndị ọzọ onye na-ahụ maka ọdịmma na ejiji na-ele anya n’iwulite ọrụ n’akụkọ. Ọ mụrụ nwa mbụ ha (nwa nwoke) na Eprel 2019 iji wulite ezinụlọ n'ime ụwa ọhụrụ.
Digne na Tiziri mụrụ nwa ha mbụ na Eprel 2019. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ndụ Lucas Digne:
Ewezuga ihe ndị siri ike, akara akara, na ihichapụ bọọlụ maka Toffees, ezinụlọ dị ezigbo mkpa nye Digne. Anyị na-ejegharị gị site na ndụ ezinụlọ ya.
Banyere Lucas Digne nna:
Philippe bụ nna Digne. Ọ rụrụ ọrụ n'ụlọ obibi akwụkwọ na Lizy-Sur-Ourcq dị nso na Meaux n'oge ndụ Digne na-egwuri egwu maka otu egwuregwu mbụ nke nwata nwoke aka ekpe bụ Mareuil-Sur-Ocrcq.
Ọ na-aga n'ekwughị na o nyere nnukwu aka na ịkpụzi Digne na bọọlụ wee rụọ ọrụ dị mkpa na mmepe ya ruo taa.
Banyere nne Lucas Digne:
Karine bụ mama Digne. Dika di ya na umu ya nwoke, o buru ibu na football ma buru onye ode akwukwo nke ulo oru nwata nke Digne Mareuil-Sur-Ocrcq.
Ezigbo nne nke ụmụ abụọ na-akpachi anya na ụmụ ya nwoke Digne bụ onye kpọbatara nwa nwa ya ọhụụ.
A zụlitere Lucas Digne site na ndị nne na nna ndị amachaghị banyere ha. Ebe E Si Nweta Foto: ClipArtStation na FotballWikia.
Banyere Lucas Digne ụmụnne:
Digne nwere nwanne nwoke akpọrọ Mathieu. Nwanne nwoke nwoke nke okenye nke ya na Digne na-akuko otu akuko nwata nwere oru ya na Lille mana o meghi oru.
Agbanyeghị, ọ kwụsịghị ịkwado Digne bụ onye na-agba mbọ imere ezinụlọ ya aha ọma n'egwuregwu bọọlụ dị elu.
Banyere ndị ikwu Lucas Digne:
Digne nwere nne na nna ochie na nna nna ndị amabeghị mgbe ọ na-enweghị ndekọ banyere nwanne nna ya, ụmụ nwanne nna ya, na ụmụ nwanne ya.
N'otu aka ahụ, a ga-amata ụmụ nwanne nne ekpe nke aka ekpe ọkachasị na ihe omume nke ndụ nwata ya ruo taa.
Ndụ Lucas Digne nke Onwe:
Ee, Digne nwere oke nlebara anya n'ụlọ ikpe ahụ, ọ bụ omume ya na-ejide obi onye ọ bụla zutere ya.
Àgwà nke Digne mara mma nke sitere na Cancer zodiac sign gụnyere ikike o nwere maka oke ochicho, ngosipụta nke ọgụgụ isi nke mmetụta uche, na nnagide na-adịghị agwụ agwụ.
Ihe na-amasị ya na ihe omume ntụrụndụ ya bụ nlegharị anya, na-ege egwu ọkachasị R&B na Rap. Digne na-ejidesi egwuregwu tennis na basketball yana ya na ndị ezinụlọ yana ndị enyi na-anọkọ.
Ilegharị anya bụ otu n'ime mmasị Lucas Digne. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Eziokwu banyere Ndụ Lucas Digne:
Ahịa uru nke million 30 nde n'oge edere tinyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri nke ahụmịhe ọkachamara ọkachamara emeela ka Digne nwee njikọ nke ndị na-akwụ ụgwọ dị elu na ọnụ ahịa dị ịtụnanya.
Ọ na-ebi ndụ okomoko nke a na-egosipụta mgbe niile na usoro mmefu ya, ụlọ yana uto ụtọ nke ụlọ obibi mgbe ọ na-egwu n'èzí Njikọ French.
Ikekwe ihe kachasị amasị ya bụ nchịkọta ụgbọ ala ya nke akara dị ka Ferrari, Mercedes, na Audi.
Lucas Digne na-egosi n'akụkụ otu ụgbọ ịnyịnya Audi ya. Ebe E Si Nweta Foto:
Eziokwu Lucas Digne:
Inyocha na ịmata ihe abụghị otu. Biko chọta ebe amachaghị ma ọ bụ ihe ị na-akọ gbasara gbasara Lucas Digne.
Pedro Rodriguez Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Smụ sịga na Mmanya: Digne enweghị akụkọ anwụrụ na ụtaba, enyeghị ya ị atụ mmanya n'oge edere.
Ọ na-agbasi mbọ ike ịdị mma ma na-agbaso ihe ọ bụla nwere ike ịkwụsị arụmọrụ ya.
Ogbugbu: O nwere akara ngosi a ma ama na ogwe aka ya na okwu esemokwu (Agaghị m eje ije naanị ') na obi ya nke emehiere ka ọ bụrụ ịhụnanya ya maka Liverpool.
N'idozi okwu n'okwu a, Digne kọwara na ọ bụ ụtụ nye nne na nna ya.
Akpa obi Lucas Digne gụrụ "Agaghị m eje ije naanị m". Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Mgbakọ Niile: Ekpe-azụ na-egwuri egwu maka ndị otu mba France ma na-anọchite anya ụdị niile site na U16 ruo U21 ọkwa.
Ọ na-egwuri egwu maka France n'oge iko ụwa 2014 ma nọrọ na njikere maka ndị otu French na 2018 FIFA ụwa iko.
Religion: Amabeghị ọtụtụ ihe banyere ọnọdụ Digne n'ihe metụtara okwukwe, agbanyeghị, ọ na-enye akara nke ịbụ onye kwere ekwe site na ịgafe onwe ya n'ọhịa egwuregwu.
Omume a bụ ihe a ma ama n'etiti Ndị Kraịst ọkachasị ndị Katọlik.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata anyị nke Lucas Digne gbakwunyere ihe ndị mere gbasara Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Akwukwo edemede nke Everton
Leonardo Spinazzola Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Eldor Shomurodov Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Renato Sanches Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ